Nhoroondo yeIndonesia | Kubhanwa Kunobviswa, chiKristu Chinoenderera
Michato yaishandiswa pakuita magungano
Panguva yainge yakabhanwa Zvapupu, ungano dzakawanda dzakaramba dzichiungana mudzimba dzehama kuti dzinamate. Zvisinei, ungano dzakawanda dzakanga dzisingaimbi nziyo dzeUmambo, kuitira kuti vanhu vasazoda kuona kuti chii chaiitika. Kune dzimwe nzvimbo, hama dzaingoerekana dzapindirwa nevamiririri vehurumende dzichiita misangano, asi kazhinji kacho dzairamba dzakadzikama.
Kazhinji hama dzaiwanzoshandisa mapati emhuri kana kuti michato semikana yekuita magungano. “Vaida kuchata vainonyoresa muchato wavo, voenda kunopiwa mvumo nemapurisa kuti vaite mabiko makuru emuchato,” akadaro Tagor Hutasoit. “Pamabiko emuchato wacho, vachati vaigara pachikuva, hama dzichipa hurukuro dzinobva muBhaibheri.”
Pane rimwe gungano, mumwe mupurisa akauya kuna Tagor, vakatanga kutaura vari pavo vega.
Mupurisa wacho akati: “Michato yakawanda inongotora maawa maviri kana kuti matatu chete. Nei michato yenyu ichibva mangwanani kusvika manheru?”
“Vamwe vachati vane matambudziko akawanda saka vanoda kubatsirwa nemazano akawanda ari muShoko raMwari,” akapindura kudaro Tagor.
“Hoo ndosaka,” mupurisa uya akadaro achigutsurira.
Hama dzakaita chikamu cheGungano Reruwa ra1983 raiti “Chibatanwa Choumambo” iro rakaitirwa munhandare huru yemutambo muJakarta, dzichihwanda nemuchato waiva nevachati vakawanda. Nhamba yehama nevanhu vaifarira vakapinda gungano racho yakasiya padiki kuti isvike 4 000, uye vanhu 125 vakabhabhatidzwa pachivande gungano racho risati ratanga. Pava paya, basa reZvapupu parakanga risisanyanyi kurambidzwa, hama dzakaita magungano akatokura kusanganisira rimwe rakapindwa nevanhu vanopfuura 15 000.
Kuvaka Hofisi Yebazi Panguva Yekubhanwa Kwebasa Redu
Mumakore ekuma1980 nekuma1990, hofisi yebazi yaigara ichiteterera hurumende kuti isarambidze Zvapupu zvaJehovha kuita basa razvo. Hama dzaiva kune dzimwe nyika dzakanyorawo tsamba kuhurumende yeIndonesia nevamiririri vayo kune dzimwe nyika, dzichibvunza kuti nei Zvapupu zvaJehovha zvakabhanwa muIndonesia. Vakuru vakuru vakawanda vehurumende vaidawo kuti Zvapupu zvaJehovha zvibvumirwe kuita basa razvo, asi bazi reDirectorate General of Christian Community Guidance iro raiva nesimba chaizvo, rairamba richingotsika madziro.
Muna 1990, hama dzakaona kuti dzaikwanisa kuvaka hofisi yebazi kunzvimbo isinganyanyi kuzivikanwa nevakawanda. Mugore iroro, Dare Rinotungamirira rakapa mvumo yokuti patengwe imwe nzvimbo yaiva pedyo neBogor, guta diki riri kumaodzanyemba kweJakarta nemakiromita anenge 40. Asi kwaingova nehama shoma dzaiva neruzivo rwekuvaka. Saka hofisi yebazi yaizovakwa sei?
Hama dzekune dzimwe nyika dzakabatsira. Hofisi Yekuvaka yekuBrooklyn neHofisi Youinjiniya Yenharaunda yeAustralia dzakabva dzatumira mapurani acho. Hama nehanzvadzi dzaizvipira dzinokwana 100 dzakabva kune dzimwe nyika dzakabatsira neunyanzvi hwaidiwa pabasa iri rakaita makore maviri.
Imwe hama yemuIndonesia inonzi Hosea Mansur iyo yaiita basa rekunotaura nevakuru vakuru vakasiyana-siyana, yakati: “Vakuru vakuru vaiva maMuslim pavakaona herumeti yangu yakanyorwa kuti H.M., vakafunga kuti H anomiririra kuti ‘Hājjī,’ rinova zita rinoremekedzwa chaizvo rinopiwa maMuslim anoita rwendo rwekunonamata kunzvimbo inonzi Mecca. Saka vakatanga kundiremekedza chaizvo. Izvozvo zvakatoita kuti zvive nyore kuronga basa rekuvaka.”
Hofisi yebazi iyi yakavakwa panguva yakanga yakabhanwa Zvapupu
Hofisi itsva yebazi iyi yakatsaurirwa musi wa19 July 1996. Hama John Barr vaiva muDare Rinotungamirira ndivo vakapa hurukuro yekutsaurira hofisi yacho. Musangano uyu wakapindwa nevanhu 285 avo vaisanganisira vanhu 118 vakabva kumahofisi emapazi akasiyana-siyana, nhengo dzemhuri yeBheteri reIndonesia dzinokwana 59 pamwe chete nevaimbova mamishinari vakabva kune dzimwe nyika. Mazuva maviri akazotevera, vanhu vanokwana 8 793 vakapinda Gungano Reruwa rakaitwa muJakarta iro raiva nemusoro waiti “Nhume Dzorugare rwaMwari.”
Jehovha Anonunura Vanhu Vake
Muna 1998, Mutungamiriri Wenyika yeIndonesia VaSoeharto (Suharto) avo vakanga vatonga kwenguva refu, vakazosiya basa pachibva pava nehurumende itsva. Hama dzakabva dzatowedzera kuita zvese zvadzaigona kuti basa radzo ribvumirwe.
Munyori Wehurumende yeIndonesia VaDjohan Effendi pavakashanya kuNew York muna 2001, vakaendawo kunoona Bheteri rekuBrooklyn uye vakaonana nenhengo nhatu dzeDare Rinotungamirira. Vakashamiswa nezvavakaona, uye vakabvuma kuti Zvapupu zvaJehovha zvine mukurumbira wakanaka pasi rese. VaEffendi vaida chaizvo kuti hurumende ibvumire Zvapupu kuti zvinamate zvakasununguka, asi vakati gweta guru rehurumende yeIndonesia VaMarzuki Darusman ndivo vaiva nemasimba ekuita izvozvo.
VaDarusman vaidawo kuti Zvapupu zvaJehovha zvive nerusununguko rwekunamata asi vamwe vakuru vakuru vomudhipatimendi ravo vakaramba vachisunga zvinhu vachitarisira kuti VaDarusman vachakurumidza kusiya basa. Musi wa1 June 2001, Tagor Hutasoit akazodaidzwa kuhofisi yegweta guru VaDarusman. “Makore 25 akanga adarika, muhofisi imwe chete iyoyo ndakanga ndambopiwa gwaro raitaura kuti Zvapupu zvaJehovha zvabhanwa,” akadaro Tagor. “Asi pazuva iri, iro raivawo zuva rekupedzisira gweta iri riri pabasa, gweta racho rakandipa gwaro raiti Zvapupu zvaJehovha zvasununguka kuita basa razvo.”
Musi wa22 March 2002, sangano reZvapupu zvaJehovha remuIndonesia rakazonyoreswa zviri pamutemo neDhipatimendi Rinoona Nezvezvitendero. Mutungamiriri wedhipatimendi racho akaudza vamiririri vebazi kuti: “Gwaro iri handiro riri kukupai rusununguko rwekunamata. Rusununguko irworwo rwunobva kuna Mwari. Gwaro rino riri kuratidza kuti chitendero chenyu chava kuzivikanwa zviri pamutemo nehurumende. Iye zvino mava nekodzero dzakangofanana nedzine zvimwe zvitendero, uye hurumende ichakutsigirai.”
Indonesia: Havana Kurega Kuungana Pamwe Chete